Click2donate က မျှော်မှန်းထားတဲ့အလှူငွေ ကျပ်သိန်းရှစ်ထောင်ထက် ပိုမိုရရှိ – PVTV Myanmar
Click2donate က တော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ ကျပ်သိန်းရှစ်ထောင်ပြည့်အောင်လှူဒါန်းပေးကြဖို့ လှုံဆော် တဲ့ ကန်ပိန်းကနေ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ကျပ်သိန်းရှစ်ထောင်ထက်ကို ပိုမိုရရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Click2donate ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ “ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာ တွေဆီကနေ အလှုခံခဲ့တဲ့ စုစုပေါင်း ရငွေ ဖိုင်နယ် update လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ international list ထဲမှာ မပါတဲ့မြန်မာကတစ်ဦးထဲ သိန်းတစ်ရာအလှူရှင် ပါ ပါသေးတာမို့စုစုပေါင်းဖိုင်နယ်ရငွေဟာမျှော်မှန်းထားတဲ့ သိန်းရှစ်ထောင်ကိုကျော်လို့သိန်းရှစ်ထောင့်ခုနှစ်ရာကိုးဆယ် ကျော် အထိကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။” လို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Click2donate အနေနဲ့ အလှူငွေပြည့်မီဖို့အရေး ဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြတဲ့ People Of Evolving Myanmar (POEM)၊ We Love Motherland (Korea) တို့နဲ့အတူ Malaysia, UAE, Japan, Brunei နိုင်ငံတို့က ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ CRPH OFP တွေအပြင် နိုင်ငံ အသီးသီးကနေ ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ကိုယ်စားပြုတဲ့သူတွေအပြင် အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ ပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်တွေ တစ် ဦးတစ်ယောက်ချင်းတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေတွေက တော်လှန်ရေးအတွက် အရှိန်တစ်ခုထိ ဖြစ်သွားစေမယ့် အဖွဲ့တစ်ခုဆီကို ရောက်ရရှိသွားမှာ ဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလှူငွေတွေ ပေးအပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဘယ်အဖွဲ့ကို ဘယ်လောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကို သတင်း ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
Thinsaw Thinsaw says:
2022-01-17 at 12:57 PM
လှူ. တဲ. မြန် မာ ညီ အ ကို ညီမ များ ကို လေးစား
ပါ တယ် တိုင်း ပြည် အ တွက် ပါ
နောင် ကျန် ခဲ. မယ်. မျိုး ဆက် တွေ အ တွက် ပေါ.